Fitsaboana fanafanana akorandram-bolo vita amin'ny volo
Fitsaboana fanamainam-bolo vita amin'ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny varahina, andiany UHF miaraka amin'ny rafitra fanamafisana induction
Application tanjona tanjona:
Mpanamboatraeran'ny akorandriaka bala varahina te fanavaozana ny misy fitaovana fanorana fanalefahana ary mitady fanatsarana fahombiazana. Ny goal ny fitsapana fampiharana ity dia hampiseho fa ny Rafitra fampidirana DW-UHF-6KW-III hihaona sy hihoatra ny takiana amin'ny fanatanterahana izany kokoa fotoanan'ny fanamainana sy fitazonana ny fitovian'ny hafanana ao anatin'ny faritra kendrena. Two habe of varahina bala akorandriaka dia nampiasaina ho an'ny fitsapana - bcasing ullets miaraka 1.682 " (42.7 mm) halavan'ny ary 0.929" (23.5 Mm) halavan'ny. Ny fotoana fanakonana kendrena dia 0.6 segondra ho an'ny faritra roa mampiasa fanafanana induction tokana coil.
HLQ DW-UHF-6kW-III vita amin'ny rivotra induction heating rafitra was ampiasaina amin'ny fizotran'ny fanakonana. Tempilaq hoso-doko taloha mamaritra raha irina hafanana amin'ny faritra annealed dia tratra.
Nipetraka tao amin'ny Indonezianina fanalefahana. Ilay faritra haverina annealed tOok manodidina ny 60% ny halavan'ny ampahany manisa hatramin'ny farany misokatra. The faritra mafana dia nolokoina amin'ny Tempilaq izay fanampianaed us manombatombana ny mari-pana fizarana. Nahatratra ny mari-pana kendrena ireo faritra roa ireo of 750 °F (398° C) amin'ny 0.6sec. Ho an'ny ny ampahany kely kokoa, ny herin'ny famatsiana herinaratra dia nahena ho 45% hisorohana ny ampahany be loatra.
Amin'ny ankapobeny, ny tena tanjon'ny induction fitsaboana hafanana dia ny manalefaka ny vy, mamerina ny firafitry ny vy tafahoatra na manala ny fihenjanana anaty fotsiny.
Amin'ny ankapobeny dia misy ny hafanana amin'ny hafanana austenitizing (800ºC sy 950ºC arakaraka ny karazana vy), arahin'ny hatsiaka miadana.
Induction Annealing dia fizotran'ny fitsaboana hafanana izay misy ny fanafanana ny fitaovana mihoatra ny mari-pana fanavotana azy. Tanjona ny hahatratra sy hitazomana ny mari-pana mety amin'ny fotoana ampy arahan'ny fihenan-tsasatra araka ny tokony ho izy. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny metallurgy sy ny siansa ara-nofo mba hahatonga ny santionany tsaboina hiasa bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny hamafiny sy ny fampitomboana ny fikojakojana azy (fahaizana miova endrika tsy misy tapaka)
Ny fanalefahana dia manova ny toe-batana ary indraindray ny fananana simika amin'ny akora satria ny recrystallization dia azo mandritra ny fizotran'ny famafana. Noho izany, ny firafitry ny firaka maro, anisan'izany ny vy karbaona, dia miankina amin'ny hafanana sy ny tahan'ny fampangatsiahana. Ny metaly ferrous, toy ny vy dia mitaky fihenan-kery miadana mankany aze. Ny fitaovana hafa (ohatra ny varahina, volafotsy) dia mety hampangatsiaka miadana amin'ny rivotra na hamonoana azy haingana amin'ny rano.
Ny fanamafisana induction dia manome fanatsarana fanaraha-maso ny fizotran'ny fanangonan-tsakafo. Ny mombamomba ny fanafanana miverimberina dia azo alaina mora foana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso mazava tsara ny herin'ny fanafanana. Koa satria ny workpiece dia manafana mivantana ny sahan'andriamby, azo atao ny mamaly haingana kokoa. Ankoatr'izay, ny fahombiazan'ny fizotran'ny fanafanana fampidirana tena ilaina amin'ny fitsaboana lava be toy izany.
Raha ampitahaina amin'ny ankamaroan'ny fomba mahazatra, ny fanindronana fampidirana dia fomba madio sy mora mandeha ho azy, tsy misy fifandraisana izay manome kalitao avo indrindra amin'ny sangan'asa voatsabo.
Tombontsoa fanamafisam-peo fanamafisana induction:
Namboarina mifanaraka amin'ny fanaraha-maso ny masontsivana amin'ny tena fotoana
Valin'ny metallurgical mitovy amin'ny azo tamin'ny lafaoro mahazatra
Tsy dia mandoto ny tontolo iainana
Ampitomboy ny fahombiazan'ny angovo
Mihena ny fotoana fanodinana
Fahafahana mifehy ny hafanana, ny mari-pana marina
Fahaizana manafana faritra kely nefa tsy manova ny mampiavaka ny sisa amin'ny ampahany
Hafanana marina sy miverimberina
Fampihenana ny oxidation ambonimbony
Fanatsarana ny tontolon'ny asa
Indostria sasany mifandraika amin'izany dia fantsom-by sy fantsona, fanafody, solika sy gazy ary fiara mandeha amin'ny fiara.
Sokajy Technologies Tags annealing, varahina manenona, akorandriaka volo bala, Bara-bala vita amin'ny varahina, fampitaovana varahina manitra, akorany varahina, fanamafisam-peo fanamafisam-peo, fampidirana amina bala, mividiana fampidirana annealing fampidirana, induction aegaling, varahina manenona varahina, akorany varahina fampidirana annealing, akorandriaka fampidirana an-tsokosoko Post Fikarohana